नेपालमा थप १ हजार ३५६ जनामा कोरोना संक्रमण, २ जनाको मृत्यु
प्रकाशित मिति : आश्विन ६, २०७७ मंगलबार
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १ हजार ३५६ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार आज मुलुकका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परिक्षणमा १ हजार ३५६ जनामा संक्रमण देखिएको हो । योसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या ६६ हजार ६३२ पुगेको छ ।
संक्रमितमध्ये हालसम्म कोरोना जितेर घर फर्किनेको संख्या ४८ हजार ६१ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ८२३ जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन् । ७२ प्रतिशत संक्रमित निको भएका छन् । हाल नेपालमा १८ हजार १४२ संक्रिय संक्रमित छन् । संस्थागत आइशोलेशनमा ९ हजार १९३ जना रहेका छन् । होम आइसोलेशनमा रहनेको संख्या ८९४९ छ । अहिले क्वारेन्टाइनमा ७ हजार १७१रहेका छन् । आज ११ हजार १५४जनाको पिसिआर परिक्षण गरिएको छ ।
थप २ जनाको मृत्यु
नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप २ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा थप २ जनाको मृत्यु भएको हो । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ४२९ पुगेको छ ।
कक्षा १२ को परीक्षा मंसिर ९ गतेबाट ! (तालिकासहित)
कोरोना भाईरसका कारण लामो समयसम्म रोकिएको कक्षा १२ को परीक्षा मंसिर ९ गतेदेखि सञ्चालन हुने
नेपालमा एकैदिन थपिए हालसम्मकै धेरै ५ हजार ७४३ संक्रमित, २६ जनाको मृत्यु
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ५ हजार ७४३ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ
भारतीय जासूसी संस्था ‘रअ’ प्रमुख गोयल काठमाडौंमा
भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख सामान्तकुमार गोयल नेपाल भ्रमण आएका छन् । बुधबार अपरान्ह इन्डियन
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनःनिर्मित रानीपोखरीको आज उद्घाटन गरेकी छन् । गोर्खा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ३५२ वर्ष